EPL: Manchester City oo iyadoo kaarka cas laga qaaday qeybtii hore guul ka gaartay kooxda Burnley… + SAWIRRO – Gool FM
(Manchester) 02 Janaayo 2017 – Kooxda kubadda cagta Manchester City ayaa iyadoo laga qaatay kaarka cas qeybtii hore ee ciyaarta waxa ay guul ka gaartay Burnley oo ay soo dhowaysay kulan ka tirsan Premier League.
Qeybtii hore ee ciyaarta 32’daqiiqo waxaa Manchester City kaarka cas oo toos ah ka qaatay Fernandinho, kaddib markii uu si xun qalad ugu galay Johann Berg Gudmundsson, kulanka ayaana lagu kala nastay barbaro goolal la’aan 0-0.
Markii dib la isugu soo laabtay qeybtii labaad ee ciyaarta Man City oo kaarka cas laga qaatay ayaa goolka la horreysay, waxaana u dhaliyey 58′ daqiiqo Gael Clichy, kaddib markii uu shabaqa la helay kubbad joog hoose ku socotay oo uu ka soo tuuray afka hore ee diillinta ganaaxa, sidaas ayey Man City 1-0 kulanka ku hoggaamisay.
Man City ayaa goolka labaad la timid waxaana kubbad uu la xarooday Sterling oo uu ku soo baxay goolhayaha meel bannaan ah ka helay 62’daqiiqo Sergio Aguero goolhayaha oo bannaanka ku maqan, kaasoo isagoo goosha gees jooga laad xoog leh oo uu soo tuuray inta birta ku dhacay shabaqa galay, Sky Blues ayaana kulanka ku gacan sarreysay 2-0.
Kooxda Burnley ayaa hal gool iska soo guday waxaana karoos la soo qaaday oo uu laaday Ben Mee, ay dhaaftay xariiqa goosha inkastoo uu soo saaray Sagna, laakiin garsooraha ayaa ansixiyey markii lagu ogaaday aaladda (Goal line Technology), kulanka ayaana Man City ay sidaasi ugu badisay 2-1.
Man City ayaa sidaasi ku soo degtay kaalinta saddexaad, iyadoo leh 42-dhibcood 20 kulan oo ay ciyaartay horyaalka Premier League, laakiin waxa ay sugi doontaa kulanka ay ciyaarto Arsenal.
EPL: Liverpool oo barbaro kala kulantay kooxda Sunderland iyo kulamadii kale ee la ciyaaray horyaalka… + SAWIRRO